ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဝင်/အထွက် လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို တိုက်ကြီးမှာတည်ဆောက်နေ - Yangon Nation News
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဝင်/အထွက် လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို တိုက်ကြီးမှာတည်ဆောက်နေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဝင်/အထွက် လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဗမာကံကုန်းကျေးရွာ၊ တာခွကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမကြီးဘေးရှိ Max Highway Co.,Ltd ပိုင်မြေတွင် Max Highway Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးလျက်ရှိ
ဒီကနေ့ ၁၆. ၁၀. ၂၀၂၀ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ မှာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နဲ့
တာဝန်ရှိသူတွေက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဝင်/အထွက် လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ပြီး COVID-19 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမည့်နေရာ၊ စောင့်ဆိုင်းရန်နေရာ၊ Positive လူနာတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနသို့ မပို့ဆောင်မှီ ယာယီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမည့်နေရာများ ပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာရှိ တိုက်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအတွက် လူနာဆောင်များပြုပြင်မွမ်းမံရမည့်အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှာကြား ခဲ့ပါတယ်။
စင်ကာပူက လှူဒါန်းတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းတွေ ရောက်ရှိ